Umahluko omtsha wombala weRedmi Qaphela 7 uyeza I-Androidsis
Umahluko omtsha wombala weRedmi Qaphela 7 uyeza
El Redmi Qaphela 7 isengukumkani wexabiso elifanelekileyo lemali yee-smartphones kwimarike. Nangona inabanquli abomeleleyo abaphikisana nesi sikhundla, esinye isixhobo esifana ne-Snapdragon 660 okanye i-SoC yezakhono ezifanayo asikafiki ngokungathandabuzekiyo esixhwila esi sikhundla.
Ekuqaleni, yayinikezelwa ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo zombala: i-Nebula Red, i-Neptune Blue kunye ne-Space Black. Nangona kunjalo, kwiimarike ezininzi, ezi zimbini zokugqibela zezona zinikezelwayo. Kodwa ngoku kubonakala ngathi kuyakubakho uguqulelo lwesine, oluya kuba mhlophe, ukuba sikhokelwa ngumsizi omtsha osemthethweni okhutshwe yinkampani.
Ukutyhilwa kwepowusta kwenziwe nge-portal ye imibuliso encinci IsiTshayina Weibo. Khumbula ukuba le yindlela yokwenza ezona zibhengezo kunye nenkqubela phambili, njengabanye abavelisi baseTshayina. Kupapasho ungabona umva weselfowuni, esele siyazi kakuhle, kodwa ngeli xesha limhlophe mhlophe.
I-Redmi Qaphela i-7 teaser emhlophe
Inguqulelo emhlophe entsha yeRedmi Qaphela 7 inokuqhayisa ngegama elithile lokuyila, ukwenzela ukunika inqanaba elingaphezulu kwinto inkampani efuna ukuyiphumeza; Oku kuyakusebenza ekuyiphindiseni kwintengiso, nokuba iselfowuni ayifuni, kuba iinombolo zentengiso ozifezekisileyo zilungile kwaye ziyaqhubeka zisanda. Ukuthandwa kolu luhlu kuphakathi kakhulu kwaye kuphezulu, kwaye abasebenzisi abazizigidi ezili-15 abanayo bayakuqinisekisa oku.
Pearl White, Marble White okanye Polar White aphakathi kwamagama amathathu anokubakho abaninzi abanokucinga ukuba inemodeli entsha. Ayaziwa ukuba iya kuba nini ngokusemthethweni, kodwa kusenokwenzeka ukuba iyakufika kwintengiso ngeentsuku okanye iiveki ezimbalwa kwaye iyakwenza ngokunyuka kwexabiso elincinci. Asazi nokuba iya kufumaneka ngaphandle kwe China, kodwa kulindeleke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umahluko omtsha wombala weRedmi Qaphela 7 uyeza
ICubot R19, i-smartphone efikelelekayo ngokujongeka komnombo